ထူးခြားဆန်းပြား ကမ္ဘာတလွှား – CantWait2Say
အမေရိကတိုက်ရဲ့ရှေးကျတဲ့မြို့တော်တွေထဲမှာမှလူဦးရေနှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့အက်ဇတက်တို့ရဲ့မြို့တော်Technochtitlanဟာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ကိုရေကန်အလယ်မှာရှိတဲ့လူလုပ်ကျွန်းကြီး ပေါ်မှာဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့ တာရိုးသုံးခနဲ့ကမ်းပေါ်က ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ မြို့မှာပိရမစ်တွေ။ ဥယာဉ်တွေ။မြေအောင်ရေမြောင်းတွေနဲ့ တူးမြောင်းတွေရှိပါတယ်။ ၁၅၂၁ခုနှစ်မှာစပိန်နယ်ချဲ့သမားတွေ ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရပါတယ်။
ရှေးအခါကရွှေရောင်ဆံပင်ရှိတဲ့ရောမလူမျိုးတွေဟာဆံပင်ကိုအနက်ရောင်ပြန်ဆေးဆိုးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွှေရောင်ဆံပင်ဟာကျွန။်ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေလို့ပါ။ဒါပေမယ့်ရွှေရောင်ဆံပင်ရှိတဲ့Augustus Caesarဟာရောမဘုရင် ဖြစ်လာပြီးနောက် အဲ့ဓလေ့ဟာမှေးမှိန်သွားခဲ့ပါတယ်။
သြစတေးလျတိုက်မှာFuckingလို့အမည်ရတဲ့မြို့ငဟ်လေးရှိပါတယ်။မြို့တော်ဝန်ကိုမြို့နာမည်ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးတဲ့အခါသူက “ဒီကလူအားလုံးFuckingဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဘာကိုဆိုလိုလဲဆို တာသဘောပေါက်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ “Fuckung က Fuckingပါပဲ။ ဒါကြောင့်Fuckingလို့ပဲဆက်လက်တည်ရှိနေမှာပါ”လို့ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။ Fuckingမြို့မှာခဏခဏနဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အမှုက မြို့နာမည်ဘုတ်ကိုလာခိုးကြတာပါ။ ဒါကြောင့်မြို့ဘဏ္ဌာငွေကိုချွေတာဖို့ နာမည်ပြောင်းဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့် လူတွေကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။
Credit ပျော်ရွှင်စရာ ဥာဏ်စမ်းကမ္ဘာ
အမရေိကတိုကျရဲ့ရှေးကတြဲ့မွို့တျောတှထေဲမှာမှလူဦးရနှေဈသိနျးကြျောရှိတဲ့အကျဇတကျတို့ရဲ့မွို့တျောTechnochtitlanဟာအကွီးဆုံးဖွဈပါတယျ။ မွို့ကိုရကေနျအလယျမှာရှိတဲ့လူလုပျကြှနျးကွီး ပျေါမှာဆောကျလုပျထားပွီးတော့ တာရိုးသုံးခနဲ့ကမျးပျေါက ဆကျသှယျထားပါတယျ။ မွို့မှာပိရမဈတှေ။ ဥယာဉျတှေ။မွအေောငျရမွေောငျးတှနေဲ့ တူးမွောငျးတှရှေိပါတယျ။ ၁၅၂၁ခုနှဈမှာစပိနျနယျခြဲ့သမားတှေ ဖကျြဆီးတာခံခဲ့ရပါတယျ။
ရှေးအခါကရှရေောငျဆံပငျရှိတဲ့ရောမလူမြိုးတှဟောဆံပငျကိုအနကျရောငျပွနျဆေးဆိုးပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှရေောငျဆံပငျဟာကြှန။ျပွညျ့တနျဆာတှနေဲ့ဆကျစပျနလေို့ပါ။ဒါပမေယျ့ရှရေောငျဆံပငျရှိတဲ့Augustus Caesarဟာရောမဘုရငျ ဖွဈလာပွီးနောကျ အဲ့ဓလဟေ့ာမှေးမှိနျသှားခဲ့ပါတယျ။
သွစတေးလတြိုကျမှာFuckingလို့အမညျရတဲ့မွို့ငဟျလေးရှိပါတယျ။မွို့တျောဝနျကိုမွို့နာမညျပွောငျးဖို့အစီအစဉျရှိမရှိမေးတဲ့အခါသူက “ဒီကလူအားလုံးFuckingဆိုတာအင်ျဂလိပျလိုဘာကိုဆိုလိုလဲဆို တာသဘောပေါကျပါတယျ ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောတို့အတှကျကတော့ “Fuckung က Fuckingပါပဲ။ ဒါကွောငျ့Fuckingလို့ပဲဆကျလကျတညျရှိနမှောပါ”လို့ဖွသှေားခဲ့ပါတယျ။ Fuckingမွို့မှာခဏခဏနဲ့တဈခုတညျးဖွဈတဲ့အမှုက မွို့နာမညျဘုတျကိုလာခိုးကွတာပါ။ ဒါကွောငျ့မွို့ဘဏ်ဌာငှကေိုခြှတောဖို့ နာမညျပွောငျးဖို့အဆိုတငျသှငျးခဲ့ပမေယျ့ လူတှကေလကျမခံခဲ့ပါဘူး။
Credit ပြျောရှငျစရာ ဉာဏျစမျးကမ်ဘာ
သင့်ကိုဆွံ့အသွားစေမယ့် ထူးဆန်းတဲ့အပြင်အဆင်အချို့ အလှအပလောကက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အသစ်အသစ်တွေပေးစွမ်းဖို့မရပ်တန့်သလို ပိုပိုပြီးရူးသွပ်မှုဆန်လာသလိုတောင် ခံစားရပါတယ်။အမြဲတမ်းလိုလို ကျွန်မတို့Instagram,Twitterဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်း ထင်မထားတဲ့ အလှပြင်မှုပုံစံတွေက surpriseလုပ်ဖို့ အသင့်စောင့်ကြိုနေသလို အခုလည်း စာရေးသူကိုဒွိဟဖြစ်စေတဲ့ အသစ်အသစ်တွေကို တွေ့ရပြန်ပါပြီ။ဆိုတော့ အလှအပရေးရာမှာ သူများထက် လက်ဦးမှုရချင်သလား?သာချင်သလား?သူများက ကိုယ့်ကို သတိထားမိစေချင်သလား? အခုစုစည်းဖော်ပြထားတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေက အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးပေးမှာပါ။ 1.Feather …
သင် ဘယ်လို အိပ်လဲ? ဘယ်လိုခေါင်းအုံးက သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလဲ?
သင် ဘယ်လို အိပ်လဲ?ဘယ်လိုခေါင်းအုံးက သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလဲ? မိမိနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ ခေါင်းအုံးကို အသုံးပြုမိတဲ့အခါ ဇက်နဲ့ လည်ပင်းတဝိုက်မှာ ကြွက်သွားနာကျင် ကိုက်ခဲမှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိနဲ့ သင့်တော်ကိုက်ညီတဲ့ ခေါင်းအုံးကို ရှာဖွေရွေးချယ်ပြီး မှန်ကန်စွာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းဟာ အိပ်စက်မှု အရည်အသွေးအတွက် အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ …